Uphando: Uluhlu lwee-imeyile luPhambili kwiiNtengiso zeB2B | Martech Zone
Abathengisi abaninzi be-B2B bayazi ukuba ukuthengisa nge-imeyile kunokuba sesona sixhobo sisebenzayo sokuvelisa, ngophando oluvela kuMbutho weNtengiso ngqo (i-DMA) obonisa umndilili we-ROI ye- $ 38 kwi- $ 1 nganye esetyenzisiweyo. Kodwa akukho mathandabuzo ukuba ukuphumeza iphulo le-imeyile eliyimpumelelo kunokuba nemiceli mngeni.
Ukuqonda ngcono imiceli mngeni abathengisi abajamelene nayo, umboneleli we-imeyile wesoftware UDelivra Ubambisene ne-Ascend2 ukuqhuba uphando phakathi kwaba baphulaphuli. Iziphumo zibandakanyiwe kwingxelo entsha enesihloko, Uluhlu lweSicwangciso se-imeyile se-B2B, Esibonelela ngolwazi kwezona zithintelo zibalulekileyo ekwakheni uluhlu lwe-imeyile olungcono, kunye nendlela abathengisi aboyisa ngayo.
Eyona nto iphambili kwiipesenti ezingama-70 kwabo baphononongiweyo yayikukukhulisa umgangatho wedatha yabo ye-imeyile. Ingxelo icacisa ukuba abathengisi abaninzi be-B2B bayayifezekisa loo njongo, ngeepesenti ezingama-43 besithi uluhlu lwee-imeyile luyanda, kwaye lipesenti eli-15 kuphela elihlangabezana nokwehla komgangatho. Amashumi amane anesibini eepesenti athi uluhlu lwabo lomgangatho aluguquki.
Ngelixa kugcinwa ucoceko, oluhlaziyiweyo uluhlu lwababhalisi kunokubonakala ngathi lusisiseko, yindawo yokuqala kuwo onke amaphulo okuthengisa nge-imeyile. Xa kuthunyelwa ii-imeyile, abathengisi akufuneki bathandabuze ukuba imiyalezo yabo ihanjiswa ngempumelelo kwiibhokisi zebhokisi yabamkeli kwaye ijolise kubabhalisi abafanelekileyo. UNeil Berman, u-CEO we-Delivra
Ke ukuba kubonakala kusisiseko, kutheni abathengisi bekufumanisa kunzima ukwenza okanye ukugcina uluhlu lweekhwalithi? Ukunqongophala kwesicwangciso esiliqili kwakhankanywa njengesona sithintelo sibaluleke kakhulu (iipesenti ezingama-51), kulandelwa luhlu olungonelanga lokwenza ucoceko (iipesenti ezingama-39), kunye neenkcukacha zesahlulo sedatha esingalunganga (iipesenti ezingama-37). Kuphela kweepesenti ezintandathu zabathengisi ekuhlolwe kubo bethatha isicwangciso sabo soluhlu lwe-imeyile "siphumelele kakhulu" ukoyisa le miqobo kunye nokufezekisa iinjongo, ngelixa iipesenti ezingama-54 zilungele "ukuphumelela ngandlela thile," kwaye iipesenti ezingama-40 bazibeka "njengabangaphumelelanga."
Olunye uluvo olunomdla kukuba ukwanda kwoluhlu lwe-imeyile, ngaphandle komgangatho, akusekho nto iphambili, kodwa uluhlu lwamaqhinga e-imeyile luyaqhubeka nokuqhuba ukwanda kobungakanani boluhlu lwe-imeyile kwiipesenti ezingama-54 zeenkampani. Ezona ndlela zintathu zisebenzayo zibandakanya:
Ubhaliso lokukhuphela umxholo (iipesenti ezingama-59)
Amaphepha okufika ngokuthe ngqo nge-imeyile (iipesenti ezingama-52)
I-imeyile kunye nokudityaniswa kwemithombo yeendaba kwezentlalo (iipesenti ezingama-38)
Olunye uphando oluphambili lubandakanya
Xa usenza isicwangciso soluhlu lwe-imeyile, ukudibanisa i-imeyile kunye nemithombo yeendaba zentlalo lelona qhinga linzima (iipesenti ezingama-38), kulandelwa ngaphandle kwe-intanethi / kwivenkile / kwiziko lokufowuna (iipesenti ezingama-28), kunye namaphepha okufika ngokuthe ngqo nge-imeyile (iipesenti ezingama-26) .
Amashumi amahlanu anesithoba eepesenti zeentengiso ze-B2B zithe ukonyuka kwamazinga okuguqula ukukhokelela kukwayinjongo ebalulekileyo.
Iipesenti ezingamashumi amahlanu ananye zeenkampani eziphonononge ukukhutshwa kwazo zonke iindawo zoluhlu lwee-imeyile zabo.
UDelivra, ngentsebenziswano no Yazisa2, ifake olu phando kwaye yafumana iimpendulo ezivela kwintengiso ye-245 B2B kunye nabathengisi abamele iinkampani ezili-123.
Khuphela iNgxelo yeQela le-imeyile ye-B2B yeDelivra
tags: b2bb2b imeyileb2b uluhlu lwe-imeyileb2b imeyileuluhlu lwe imeyile
Iingcebiso ezi-7 zokwakha uMatshini wokuThengisa uQiniso